Di iche Asusu - AfrikaArXiv
By AfricaArXiv , 2 ọnwa 2 ọnwa gara aga
By Johanssen Obanda, 5 ọnwa 3 ọnwa gara aga
Kpọọ maka ntinye, Science Decolonise
Ndị otu nọ na AfricanArXiv ji nganga mara ọkwa na anyị na Masakhane na -arụkọ ọrụ iji wuo njikọta asụsụ dị iche iche nke nyocha Afrịka site na ntụgharị ihe odide nyocha nke enyere AfricaArXiv. N'ime edemede edepụtara, ndị otu nọ na Masakhane na AfricArXiv ga -ahọrọ ihe ruru 180 na mkpokọta maka ntụgharị.
By Johanssen Obanda, 6 ọnwa 3 ọnwa gara aga
Ihe Omuma Ama Ala
AI na Nsụgharị Na-enweghị Ntụgharị Nchọpụta na Asụsụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọchịchị n'Africa
“N’ịgbalite Usoro Nhazi Asụsụ (NLP), ọ ga-adịrịrị ndị na-abụghị ndị Indonesia [ma ọ bụ ndị Africa] mfe ịghọta isiokwu ndị e dere n’asụsụ Indonesian [ma ọ bụ olumba mpaghara Africa]. N'ihi ya, a pụrụ ibelata ibu dị n'iji Bekee mee ihe ozugbo dị ka asụsụ bụ́ isi sayensị. ”
By Luke Okeke, 7 ọnwa 3 ọnwa gara aga
By Otu Tụgharịa Science, 9 ọnwa 3 ọnwa gara aga
Florence Piron bụ ọkà mmụta ihe banyere mmadụ na ụkpụrụ omume, na-arụ ọrụ dị ka prọfesọ na Ngalaba Ozi na Nkwurịta Okwu na Mahadum Laval dị na Quebec, Canada. Dị ka onye nkwado siri ike maka Open Access, ọ kụziri echiche dị oke egwu site na usoro ọmụmụ multidisciplinary na ụkpụrụ omume, ọchịchị onye kwuo uche ya na ibikọ ọnụ ma na-enyocha oke njikọ ahụ. GỤKWUO…
By Otu AfricArXiv, 9 ọnwa 3 ọnwa gara aga
Usoro Decolonising Research
AfricArXiv na-enye aka na ichikota obodo site na ịkwalite nghọta nke ịkpa mba site na mbido; ịnakwere ntinye ntinye na asụsụ abụọ na asụsụ ala nna, na-enyere ikike nke nyocha nke ndị Africa site na ịtọlite ​​ebe nchekwa dijitalụ nke Africa nwere maka kọntinent Africa.
By Joel Onyango , 9 ọnwa 3 ọnwa gara aga
Nweta oghe (OA) bu ukpuru nke usoro na otutu omume nke eji esite na ntinye nyocha n ’Intanet, n’enweghi onu ahia ma obu ihe mgbochi uzo ozo. AfricanArXiv na African Science Literacy Network (ASLN) na-agbakọ aka ọnụ iji kwalite nnyefe nke isiokwu na AfricanArXiv na ntụgharị nke isiokwu ndị a. GỤKWUO…
By Johanssen Obanda & Abdullahi Tsanni, 2 afọ 3 ọnwa gara aga
Mgbasa ozi banyere omume kacha mma na aro omume iji belata mgbasa nke coronavirus bụ nke enyerekarị na Bekee. A na-asụ ihe dị ka puku asụsụ 2000 na Afrịka, ndị mmadụ nwekwara ikike ịgwa ha asụsụ ha gbasara ihe na-eme na etu ha nwere ike isi GỤKWUO…
By Ndi otuAAAXXiv, 2 afọ 11 ọnwa gara aga
COVID-19 Africa Ibọrọ
Colnakọta ego sitere na nke ọkwa niile nke ndị Africa iji hazie mmeghachi omume COVID19 site na ndị otu Africa na ndị na - eme ihe ike Ọtụtụ puku ndị mmadụ na ọtụtụ narị ndị isi na ndị otu mba, CBOs, NPOs, gọọmentị na ụlọ ọrụ na - agbasi mbọ ike iji belata nsonaazụ ọrịa a. Afrịka ala Afrịka. Anyị abụghị GỤKWUO…
By Jo Havemann kwuru, 2 afọ 11 ọnwa gara aga